Iqiniso elidabukisayo kakhulu namuhla lingabizwa ngokuthi izinkinga zesilisa zamadoda zivela kaningi, ngaphandle kwalokho, ukuhlupheka ngale nkinga kuvame ukuba amadoda amadala nabantu abasha. Ukubiza izizathu ezithathwa yizinkolelo ezibangelwa ukuphazamiseka kwe-potency akudingekile neze, ngoba amalungu amaningi ebulili obuqine ngokwabo azi ukuthi ukuphuza ngokweqile utshwala, ugwayi nezinye izici eziningi eziholela ekutheni abantu bangabi nobulili, futhi abaningi bancike emadodeni ngokwabo.
Ithonya lokucindezeleka kumuntu wesilisa
Kodwa esikhathini sethu awukwazi ukuphunyuka ekucindezelekeni okuvamile, imvelo esabekayo, ukusebenza kanzima, ngaphandle kwalokho, uma kunezifo ezehlukene kubalulekile ukuthatha izandla ezinamandla kakhulu futhi ezinzima zemithi yomzimba.
Kungakhathaliseki ukuthi iziphi izinkinga ezinamandla, cishe kuzo zonke izimo lokhu kuholela ekucindezelekeni okungeziwe, okusemandleni okudlula ekucindezelekeni okude, okwenza kube nzima ukubhekana nalesi simo. Wonke umuntu uyazi ukuthi izinkinga ezinomsebenzi we-erectile zisondelene kakhulu, futhi iziguli azishesha ukuthola usizo esibhedlela. Eminyakeni yamuva, kuye kwaba nezinguquko ezithile kuleso simo: amadoda, ukulimaza konke ukuthobeka, waqala ukubonisana nodokotela kaningi ngenkinga enjalo, kodwa ngesikhathi esifanayo, lesi sifo saqala ukugcinwa izikhathi ezingamashumi eminyaka eminyakeni yamuva. Amadoda amaningi asindisa izixazululo zomuntu ukuxazulula inkinga enjalo, njengokunciphisa amandla, njengoba ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthi abaphulukise.
Amathiphu kanye nezindlela zokupheka zomphakathi zokuthuthukisa ikhono lamadoda
Kudingeka ukuthatha lezi zitshalo zokwelapha ezilandelayo: ama-gramu angu-10 we-yarrow, ama-gramu angu-50 wezinsizi ze-ayr marsh nezinhlamvu ze-fenugreek, ngakho konke lokhu kuhlanganiswa okuhle kakhulu. Thatha izipuni ezimbili zaleli qoqo, uthele ezitsheni uphinde uthele izinkomishi ezintathu zamanzi abilayo, uphikelela konke lokhu amahora ayisithupha, bese udla kathathu ngosuku, ingilazi eyodwa yokukhipha, ngemuva kokudla. Inkambo yokuqhubeka nezinyanga ezingu-1, 5 - 2.
Ngokuvamile amadoda azicabangi njengabanamandla, kodwa hhayi ngokuqinisa amandla azo ezocansi, yilokho okulandelayo okuzosiza. Thatha amagremu angu-20 we-valerian impande ne-immortelle izimbali, ama-gramu angu-10 e-calendula, ama-gramu angu-50 we-wort yase-St. John. Khona-ke ukumnika okulungiselelwe, isipuni esingu-1 seqoqo sithathwa yi-1 ingilazi yamanzi abilayo. Phuza kathathu ngosuku. Lezi zindlela zokwenza ngcono okusheshayo kwe-potency zizosiza kakhulu uma izinkinga zomsebenzi wezocansi zenzeke ngenxa yokukhathala: ngokwengqondo noma ngokomzimba.
Izimpande notshani we-sainfoin zihlwanyelwa, futhi umhluzi wamanzi ulungiswe kubo.
Ngokwemvelo, le nkinga ayizange ivele izolo kodwa hhayi namhlanje futhi ngeke ilaphe imishanguzo engu-100% maduzane. Ngeshwa, ukwelashwa kokuntuleka kwamadoda kuyinkqubo ende, umphumela awuhlali njalo, ngakho-ke izindlela zabantu zingasetshenziswa ngokugcwele ukukhulisa amandla esikhathini sethu. Noma kunjalo kukhona abantu abadlulisela futhi bagcine ulwazi lwabakhokho babo, ithemba lihlala, futhi ngenxa yamadoda asevele adlule ngenkinga enjalo, izimfihlo eziningi ziba ukukhululwa kulabo abathintekile kakhulu ekufuneni usizo esimweni esinjalo.
Impela indlela endala futhi eminingi eqinisekisiwe. Kudingeka ukuthatha izibuko ezimbili ze-sunflower, zihlanza kahle futhi uzime, zifudumeke epanini lokuthosa. Imbewu eyengeziwe ichotshoziwe kahle (kungenzeka nge-grinder yekhofi), akudingekile ukususa imbewu ebantwini. Leli bhulu kufanele ligcwaliswe ngamalitha ayisishiyagalolunye amanzi ashisayo, bese umlilo omncane uletha emathunjini. Ungathathi ukupheka. Futhi emva kwakho konke lokhu kwamathumba, masuse ngokushesha emlilweni, ugeze, uphole. Kulesi ketshezi faka izipuni ezimbili zejuju, uhlanganise kahle. Ukusebenzisa le-ejenti nsuku zonke ekuseni, empeleni kwisisu esingenalutho ngamamitha ayizigidi eziyikhulu. Ayikho imikhawulo eqondile ekusetshenzisweni kwalolu remedy, kodwa ngesikhathi esisheshayo kufanele kube ngcono, ukwanda komsebenzi wokusebenza, ithoni ebalulekile. Labo abasebenzisa leli thuluzi bathi, naphezu kokulula kokulungiselela, isiphuzo siyasebenza kakhulu emzimbeni.
Iningi labantu liphikisana ngokuthi isethi ekhethekile yokudla ingahle ikhulise ubuhlungu obukhulu kakhulu besilisa. Isibonelo, bakhuluma ngokuhle mayelana nobusi kanye nempova - i-perge. Eziningi ze-microelements eziwusizo, ezidingeka ngumzimba wamadoda, ziqukethe amantongomane. Imikhiqizo eningi enhle ingenziwa ngesisekelo salezi zithako, isibonelo, ingxube ye-perga, uju kanye ne-walnuts inomphumela omuhle kakhulu, ngoba kunokuqukethwe okudingekayo kwamaprotheni angcono kakhulu, ngenxa yobusi. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwemikhiqizo engenhla, ukudla kufanele kube nomzimba, izithelo ezihlukahlukene, amafutha omnqumo.
Amakhambi omphakathi okwandisa ama-potency wesilisa kanye nokwelapha ezinye izifo eziningi zinhle ngoba ziyanconywa abantu abaye babhekana nemiphumela emihle ngokwabo, akuyona into ehlukile futhi kusho ukuthi ukwandisa amandla omzimba. Abantu abaningi bayazi ukuthi ukudla okuluhlaza kunisiza ukwandisa amandla wesilisa. Isibonelo, i-asparagusi, i-basil, i-parsley, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isizinda seseyili sisiza kakhulu. Abesifazane abanesithakazelo sokuthi abathandekayo babo babe indoda enamandla akudingeki ukuba basindise le mikhiqizo, okumele ukuthi i-landlady ehlakaniphile kufanele ibe nayo etafuleni elisha.
Amakhambi omphakathi - indlela yokuyeka ukubhema?
Indlela yokwelapha izixazululo zomuntu we-asterisks zamasondo
Ukwelapha i-haljazion ngamakhambi abantu
Ukupheka kwabantu ukuphathwa kwe-birch tar
I-amber acid yokulahlekelwa isisindo
Izinto eziphezulu eziyishumi ezinciphisa ukuphila nsuku zonke
Ngesikhathi uSobchak elala ebusuku eMoscow, uVitorgan wangena ngaphansi kwesiteleka
Ikhekhe elimhlophe elimhlophe
AmaH Hamburgers anezinyamazane nama-cheese brie
U-Anna Sedokova uhlazekile ngezidakamizwa zokukhangisa, ividiyo
Kungani ungaphupha umshado womunye?
I-Appetizer yenkukhu yenkukhu e-orange sauce
Izimfihlo eziyinhloko zokuvumelana kobulili